Uyini Umphumela Wokukhangisa Kwezenhlalo? | Martech Zone
Kuyini ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana? Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala njengombuzo oyisisekelo, kepha kufanele ingxoxo ethile. Kunobukhulu obuthile kusu elihle lokukhangisa ngemidiya yezenhlalo kanye nobudlelwano balo obuxhumene namanye amasu wesiteshi njengokuqukethwe, ukusesha, i-imeyili neselula.
Ake sibuyele encazelweni yokumaketha. Ukumaketha isenzo noma ibhizinisi lokucwaninga, ukuhlela, ukwenza, ukukhuthaza nokuthengisa imikhiqizo noma izinsizakalo. Imithombo yezokuxhumana iyindlela yokuxhumana eyenza abasebenzisi bakwazi ukudala okuqukethwe, babelane ngokuqukethwe noma babambe iqhaza ezinkundleni zokuxhumana. Imithombo yezokuxhumana njengomphakathi ihluke kakhulu kwimidiya yendabuko ngenxa yezizathu ezimbili. Okokuqala, lo msebenzi ubesesidlangalaleni futhi uyatholakala kubakhangisi ngocwaningo. Okwesibili, okuphakathi kuvumela ukuxhumana oku-bi-ohlangothini - kokubili okuqondile nokungaqondile.
Kukhona abasebenzisi abasebenzisa imithombo yezokuxhumana abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-3.78 emhlabeni jikelele futhi leli nani lizoqhubeka nokukhula eminyakeni embalwa ezayo. Njengoba kumile, lokho kulingana namaphesenti angama-48 we inani lomhlaba lamanje.
Kuyini ukumaketha kwezokuxhumana komphakathi?
Isu eliqinile lokumaketha imidiya yezokuxhumana kufanele lifake zombili izici ezihlukile zemithombo yezokuxhumana kanye nokusetshenziswa kwezindlela brand engabhekwa futhi inyuswe ngayo. Lokho kusho ukuthi ukuba nesu lokucindezela ama-tweets ama-2 ngosuku akuyona isu elihlanganisa ngokuphelele imidiya yezokuxhumana. Isu eliphelele lifaka amathuluzi nezindlela zokwenza lokhu:
Market Research - Ukuqoqa imininingwane ukuze ucwaninge kangcono futhi uyiqonde futhi uxhumane nezithameli zakho.
Ukulalela Komphakathi - Ukuqapha nokuphendula izicelo eziqondile ezivela kuzithameli zakho, kufaka phakathi insizakalo yamakhasimende noma izicelo zokuthengisa.
Ukuphathwa Kwezimpawu - Ukulondolozwa nokwenza ngcono idumela lakho lomuntu siqu noma lomkhiqizo, kufaka phakathi ukubhekwa kokuqapha, ukuqoqwa, nokushicilelwa.
Ukushicilelwa Komphakathi - ukuhlela, ukuhlela, nokushicilela okuqukethwe okunikeza ukuqwashisa kanye nenani kumakhasimende akho angahle abe khona, kufaka phakathi ukuthi kwenziwa kanjani, ubufakazi, ubuholi bomcabango, ukubuyekezwa komkhiqizo, izindaba, kanye nokuzijabulisa.
Izingosi Social - ukuzibandakanya ngenkuthalo kumasu akhulisa ukufinyelela kwakho kubathonya, amathemba, amakhasimende, kanye nabasebenzi.
Ukuphakanyiswa Komphakathi - Amasu wokuphromotha aqhuba imiphumela yebhizinisi, kufaka phakathi ukukhangisa, okunikezwayo, nokukhuthaza. Lokhu kungadlulela ekutholeni nasekuqasheni abathonya ukuthi bandise ukukhushulwa kwakho kumanethiwekhi abo.
Imiphumela yebhizinisi akudingeki ukuthi kube ukuthenga kwangempela ngaso sonke isikhathi, kepha ingaba nokwakha ukuqwashisa, ukwethembana negunya. Eqinisweni, imithombo yezokuxhumana kwesinye isikhathi akuyona indlela efanelekile yokuthenga okuqondile.
Ama-73% wabakhangisi bakholelwa ukuthi imizamo yabo ngokumaketha imithombo yezokuxhumana ibe nempumelelo ngandlela thile noma iphumelele kakhulu ebhizinisini labo.
Imithombo yezokuxhumana isetshenziswa kakhulu ukuthola ngomlomo, umthombo wengxoxo yocwaningo, nomthombo wokuxhuma - ngokusebenzisa abantu - enkampanini. Ngoba i-bi-ohlangothini, ihluke kakhulu kwezinye iziteshi zokumaketha.
Abathengi abangu-71% abanesipiliyoni esihle ngophawu ezinkundleni zokuxhumana kungenzeka bancome lo mkhiqizo kubangani nasemindenini yabo.
Buka Martech Zone'S Social Media Izibalo Infographic
I-Social Media Mediums ne-Use Use
Ama-54% wabasebenzisi bezokuxhumana basebenzisa imithombo yezokuxhumana ukucwaninga ngemikhiqizo.
Market Research - Ngisebenza nomkhiqizi wezingubo okwamanje owethula umkhiqizo wabo oqonde ngqo kubathengi online. Sisebenzisa ukulalela komphakathi ukukhomba amagama asemqoka abhekiswe kubasebenzisi lapho bekhuluma ngabancintisana nabo abaphezulu ukuze sikwazi ukufaka leso silulumagama emizamweni yethu yokubeka uphawu.
Ukulalela Komphakathi - Nginezixwayiso ezibekelwe umkhiqizo wami kanye naleli sayithi ukuze ngibone engikushoyo ku-inthanethi futhi ngikwazi ukuziphendula ngqo. Akuwona wonke umuntu omaka uphawu kokuthunyelwe, ngakho-ke ukulalela kubalulekile.
Ukuphathwa Kwezimpawu - Nginemikhiqizo emibili engisebenza nayo esethe izicelo zokubuyekeza ezizenzakalelayo zamakhasimende abo. Konke ukubuyekeza kuqoqwa futhi kuphendulwe kukho, futhi amakhasimende ajabule ayaphoqwa ukuthi abelane ngezibuyekezo zawo ku-inthanethi. Lokhu kuholele ekwandeni kokubonakala emiphumeleni yosesho lwasendaweni.
Ukushicilelwa Komphakathi - Ngisebenza nezinkampani eziningana eziphatha amakhalenda wokuqukethwe futhi ngigxilise imizamo yazo yokuhlela ku I-Agorapulse (Ngiyinxusa). Lokhu kubasindisa ithani lesikhathi ngoba akudingeki ukuthi baphume baphathe yonke imishini ngqo. Sifaka umkhankaso wokumaka i-UTM ukuze sikwazi ukubona ukuthi imithombo yezokuxhumana ishayela kanjani ithrafikhi nokuguqulwa kubuyela kusayithi labo.
Izingosi Social - Ngisebenzisa ngenkuthalo ipulatifomu engisizayo ekuboneni nasekuxhumaneni nabathonya nezinhlangano ezingangiqasha ku-LinkedIn. Kube nomthelela omkhulu emathubeni ami okukhuluma futhi kusize inkampani yami ukukhulisa ukuthengisa kwayo.
Ukuphakanyiswa Komphakathi - Amaklayenti ami amaningi afaka phakathi ukukhangisa kwemidiya yezenhlalo lapho bekhuthaza imicimbi, ama-webinar, noma ukuthengisa. Ukuqondiswa okumangazayo kwalezi zinkundla zezikhangiso okunikezayo kuyasebenziseka ngendlela emangalisayo.
Ngiyabona ukuthi ungakha imikhankaso yemidiya yezokuxhumana eyinkimbinkimbi efaka ukusetshenziswa nezindlela zokuxhumana ngezindlela ezingafani nezinketho zami ezingenhla. Ngimane ngikhipha ukusetshenziswa okujwayelekile komunye nomunye wabanikezeli ukunikela ukuqonda kokuthi zingasetshenziswa kanjani ngokuhlukile.
Abathengisi abaningi bathambekele ekuthambekeni bebheke endaweni ebanda kunazo zonke noma leyo abakhululeke kakhulu ngayo. Le yingozi elinde ukwenzeka ngoba abayisebenzisi noma bahlanganise abalamuli ngokusemandleni abo.
Indlela Amabhizinisi Ayisebenzisa Ngayo Imidiya Yezokuxhumana
Veza umkhiqizo wakho - Izwi lomlomo lisebenza ngendlela emangalisayo ngoba lihambisana kakhulu. Abantu abasembonini ethile, njengesibonelo, bavame ukuhlangana eziteshini zokuxhumana nakumaqembu. Uma umuntu oyedwa abelana ngohlobo lwakho lomkhiqizo, umkhiqizo noma insizakalo, kungabonakala futhi kwabelwe izethameli ezibandakanyeke kakhulu.
Thuthukisa umphakathi oqotho - uma unecebo elisebenzayo lomphakathi lokunikeza izethameli zakho inani - kungaba ngosizo oluqondile, okuqukethwe okuhlanganisiwe, noma ezinye izindaba, amathiphu namasu, umphakathi wakho uzokhula ukwazise futhi ukwethembe. Ukwethenjwa negunya kuyizinto ezibalulekile kunoma yisiphi isinqumo sokuthenga.
Thuthukisa insizakalo yamakhasimende - lapho ikhasimende lakho likubizela usizo, ingxoxo engu-1: 1. Kepha lapho ikhasimende lifinyelela ezinkundleni zokuxhumana, izethameli zakho zibona ukuthi usabela kanjani futhi uphendula kanjani izidingo zazo. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kungenziwa kuzwakala kuwo wonke amagumbi omhlaba… futhi kanjalo nenhlekelele yokuhlinzekwa kwamakhasimende.
Khulisa ukuvezwa kwedijithali - kungani okuqukethwe komkhiqizo ngaphandle kwecebo lokwabelana nokukukhuthaza? Ukuthuthukisa okuqukethwe akusho uma uyakha, izofika. Ngeke. Ngakho-ke ukwakha inethiwekhi enkulu yokuxhumana nomphakathi lapho umphakathi uba ngabasekeli bemikhiqizo kunamandla amakhulu.
Thuthukisa ithrafikhi ne-SEO - Ngenkathi izinjini zokusesha ziqhubeka nokukhipha izixhumanisi, abalandeli nabalandeli njengento eqondile ekubekweni kwenjini yokusesha, akungabazeki ukuthi isu lezokuxhumana lizoqhuba imiphumela emihle yenjini yokusesha.
Nweba ukuthengisa futhi ufinyelele izithameli ezintsha - kufakazelwe lokho abantu abathengisayo abafaka isu lokuxhumana nabathengi labo abangakwenzi. Futhi, abantu bakho abathengisayo bayaqonda ukuthi bangabhekana kanjani nempendulo engemihle enqubeni yokuthengisa ngoba empeleni bakhuluma nabantu nsuku zonke. Umnyango wakho wokumaketha kaningi awenzi. Ukubeka abamele abathengisi bakho kwezenhlalo ukwakha ubukhona kuyindlela enhle yokwandisa ukufinyelela kwakho.
Sika izindleko zokumaketha - ngenkathi kudinga umfutho, ukukhula okuhamba phambili kuma-social media ngokulandelayo, amasheya, nokuchofoza ekugcineni kuzonciphisa izindleko ngenkathi kukhuphuka isidingo. Kukhona izindaba ezingakholeki zezinkampani eziqala ukusuka ekwandeni ziye ekwandeni ngemuva kokwakha ubukhona bezokuxhumana obuhlukile. Lokho kudinga isu elingaphikisana namasiko amaningi ezinkampani. Kukhona nezinkampani eziningi ezesabekayo ezinkundleni zokuxhumana futhi zimosha nje isikhathi sazo.
Ama-49% wabathengi athi bathembele kwizincomo ezinomthelela ezinkundleni zokuxhumana ukwazisa ngesinqumo sabo sokuthenga.
Ngaphakathi kokukodwa kwalokhu kukhona izindlela zokwandisa ukutholwa nokugcinwa kwamakhasimende akho kanye nokuwathengisela ohambweni lwawo lwamakhasimende.
Umphumela Wezokuxhumana Komphakathi
Yize ngingahlali ngiphoqa amaklayenti ami ukuthi atshale imali ngokuphelele kuyo yonke imikhuba yezokuxhumana, ngibona ukubuya okuqhubekayo kutshalo-mali lapho amaklayenti ami elawula idumela lawo futhi ezakha inani nabalandeli babo online. Kunoma ikuphi, ukungawanaki amandla ezinkundla zokuxhumana kungaba sengozini yomkhiqizo uma bengaphathi kahle inkinga yokuhlinzekwa kwamakhasimende. Amakhasimende akho alindele ukuthi ubekhona futhi uphendule ngesikhathi esifanele kuzinkundla zokuxhumana ezisemqoka… ukufaka amathuluzi namasu okwenza lokhu kubalulekile.
Tags: FacebookUkukhangisa ku-Facebookukuxhumana kwe-linkedinucwaningo lwemaketheidumela onlinePinterestidumelaukuphathwa kwedumelaIzibuyekezoukulalela komphakathiukukhangisa kwezokuxhumanainhloso yezokuxhumanaSocial Media Marketingukukhushulwa kwezindaba zokuxhumanainkundla yezokuxhumanasocial networkingukukhushulwa komphakathiukushicilela kwezenhlaloTikTokukumaketha kwe-YouTube
Jan 6, 2009 ku-7: 38 AM
Angikwazanga ukuvuma okuningi, ngijwayele ukuba yiloyo emcimbini ozama ukufaka umsebenzi wami wevidiyo kubaculi! Futhi noma ngabe bebenesithakazelo, bebengekho emiqondweni efanele, hhayi njengalapho bexhumekile ku-inthanethi bese bethola isiza sami bese bechitha isikhathi esithile bebuka umsebenzi wami, manje amaklayenti angithinta.
Ngokuya ngevidiyo oyisebenzisayo ukwenza ngezifiso ngokwakho, ingabe kungcono ukunamathela ukubhala okuthunyelwe kwamagama angachazeki noma ucabanga ukuthi ukuvota kungumbono omuhle futhi?
Jan 6, 2009 ku-8: 09 AM
Ngiyabonga! Izinzuzo zokubloga nevidiyo ukuhlinzeka ngamagama aseshekayo zisengumnqobi encwadini yami. Idlanzana labantu lisebenzisa ukuseshwa kwamavidiyo - futhi phakathi kwalabo, abaningi abaziniki isikhathi sokuyichaza kahle ividiyo.
Ukuhlanganisa laba bobabili kunamandla kepha kuthatha isikhashana, noma kunjalo. Ukukwazi ukushicilela i-Video Blog (Podcastable), FUTHI ibhulogi ngevidiyo ngayinye nakanjani kuzothuthukisa amathuba akho okutholakala!
Jan 7, 2009 ku-12: 29 AM
Okuthunyelwe okuhle uDoug. Ngibonile osomabhizinisi abaningi abazimele besebenzisa kabi amanethiwekhi omphakathi. Akubukeki nje kuphela njengogaxekile, kepha kunuka ugaxekile oshibhile. Indlela engcono ukuthatha isikhathi sokwakha okuqukethwe okuku-inthanethi (ibhulogi iyindlela enhle), wakhe ubuchwepheshe, ubonise ubuhle bakho emsebenzini wakho, futhi uzuze imiphumela yosesho.
Jan 7, 2009 ku-7: 42 AM
UDoug lokhu okuthunyelwe okuhle. Njengenkampani yewebhu enhlobonhlobo, sizama njalo ukuthola izindlela ezintsha zokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhulisa ngempumelelo isikhundla sethu sokuthengisa nokumaketha. Ngicabanga ukuthi ushaye amaphuzu abalulekile aqinile ngokusetshenziswa kabi kwezokuxhumana, izinto engicabanga ukuthi nochwepheshe kufanele bazikhumbule.